Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Forex Lens
Bixiyaha adeegga ma kireysan doono, ma iibin doono, ma geli doono ama sinaba uma isticmaali doono macluumaadka macmiilka macluumaadka macluumaadka macaamiisha. Macluumaadkaan waxaa loo hayn doonaa si adag oo sir ah qaabka ugu sareeya ee suurogalka ah.
Waxaan ururinaa cinwaannada e-mayl ee kuwa nagala soo xiriira email-ka, isku-darka macluumaadka ku saabsan bogagga ay macaamiisha galayaan ama soo booqdaan, goobta ugu dhow, cinwaanka IP, iyo macluumaadka ay tabaruceen macaamilka (sida macluumaadka sahanka iyo / ama diiwaangelinta goobta) Waxaan soo aruurinay waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo waxa ku jira boggaga internetka iyo tayada adeeggayaga.
Waxaan ku weydiisaneynaa macluumaad sida magacaaga, magaca shirkaddaada, cinwaanka emaylka, cinwaanka biilasha iyo macluumaadka kaarka deynta ee loogu talagalay dadka isticmaala adeegyadayada. Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka la ururiyey ujeedooyinka guud ee soo socda: alaabooyinka iyo bixinta adeegyada, biilasha, aqoonsiga iyo sugida, hagaajinta adeegyada, xiriirka, iyo cilmi baarista.
Cookie waa xog yar oo xog ah, oo inta badan ay kujirto aqoonsi u gaar ah oo aan la garanayn, kaas oo laga soo dirayo biraawsarkaaga kombiyuutarada websaydhka isla markaana lagu kaydiyo kombiyuutarkaaga darawgiisa adag. Kukiyada waxaa looga baahan yahay inay adeegsadaan adeegeena. Waxaan u isticmaalnaa buskudka si aan u duubno macluumaadka kal-fadhiga hadda jira, laakiin ha u isticmaalin cookies-ka joogtada ah.
Waxaan u adeegsanaa iibiyaasha dhinac saddexaad iyo la-hawlgalayaasha marti-gelinta ah inay bixiyaan agabyada loo baahan yahay, softiweerka, kumbuyuutarrada, kaydinta iyo tikniyoolajiyadda la xiriira ee looga baahan yahay in lagu socodsiinayo howlaha la fidiyo. In kasta oo aan leenahay koodh, xog-ururinta iyo dhammaan xuquuqaha dalabka, waad ilaalinaysaa dhammaan xuquuqahaaga xogtaada.
Waxa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno macluumaadka shakhsiga lagu garan karo duruufaha gaarka ah, sida adoo raacaya amar maxkamadeed ama marka ficilladaadu xad gudbaan shuruudaha Adeegga.
Waxaa laga yaabaa inaan marmar cusbooneysiinno siyaasaddan oo aan kugu soo wargelin doonno isbeddelo muhiim ah oo ku saabsan sida aan ula dhaqanno macluumaadka shakhsiyeed annagoo u dirin ogeysiis cinwaanka e-maylka aasaasiga ah ee loogu talagalay koontadaada ama annagoo ku soo dhejinay ogeysiis caan ah boggayaga. Tan waxaa ku jira gudbinta xogta dhacdada Forex Lens laga helo ama lagu biiro shirkad kale.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa loo soo ururiyey si loogu adeego kuwa ka welwelsan sida loo isticmaalo 'Macluumaadka Aqoonsiga Shakhsiyadeed' (PII) khadka internetka. PII, sida lagu sharxay sharciga qaaska ee Mareykanka iyo amniga macluumaadka, waa macluumaad loo adeegsan karo kaligiis ama macluumaad kale si loo garto, loola xiriiro, ama loo helo qof kaligiis ah, ama in lagu aqoonsado shaqsi ahaan. Fadlan si taxaddar leh u aqri siyaasaddeena asturnaanta si aad u hesho faham cad oo ku saabsan sida aan u ururinno, u adeegsanno, aan u ilaalinno ama haddii kale aan u maareeyno Macluumaadkaaga Aqoonsiga Shakhsiga ah iyadoo la raacayo websaydhkeena
Macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aanu ka soo aruurinno dadka booqda boggayaga, bogga ama appka?
Markaad dalbanayso ama iska diiwaangelinayso bartayada, sida ku habboon, waxaa lagu weydiisan karaa inaad ku qorto magacaaga, cinwaanka emaylka, cinwaanka boostada, lambarka taleefanka, macluumaadka kaarka deynta, lambarka amniga bulshada, Goobaha Macaamiisha ama faahfaahinta kale si ay kaaga caawiyaan khibradaada.
Goorma ayaan aruurinaa macluumaadka?
Waxaan ururinaa macluumaad kugu laga bilaabo marka aad iska diiwaan gelin on our site, dalban, subscribe to warsidaha ah, ay ka jawaabaan suaalo, buuxiso foom, Isticmaalka Live Chat, fur Ticket Support ama geli macluumaadka on our site.
Noo soo gudbi jawaab celin ku saabsan badeecadaheena ama adeegyadeega
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka aan kaa soo aruurinno marka aad isdiiwaangeliso, sameyso iibso, u qorto warsideedkayaga, ka jawaabista sahaminta ama isgaarsiinta suuq-geynta, bogga internetka, ama adeegso qaar ka mid ah sifooyinka kale ee bogga siyaabaha soo socda:
• Si aad u sameysid khibradaada iyo inaad noo ogolaato inaad noo soo gudbiso nooca maadooyinka iyo waxyaalaha la bixiyo ee aad daneyneyso.
• Si loo hagaajiyo boggayaga si aan kuugu adeegno.
• Si aad noogu oggolaato inaan kuugu adeegno si aad uga jawaabto codsiyada adeegga macaamiisha.
• Si aad u maamusho tartan, dallacsiinta, sahaminta ama muuqaal kale oo goobta ah.
• Si aad si deg deg ah wax uga qabato macaamilkaaga
• Si aad u weydiisatid qiimeynta iyo dib u eegista adeegyada ama alaabta
• Si aad ula socoto iyaga ka dib waraaqaha (sheekaysiga live, email ama taleefanno telefoon)
Boggayaga internetka waxa loo sameeyaa si joogto ah oo loogu talagalay godadka ammaanka iyo bini'aadamka ee loo yaqaan si loo gaaro booqashadaada boggeena sida ugu macquulsan.
Waxaan u isticmaalnaa Sahayda Xakamaynta ee joogtada ah.
Macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaa ku jira shabakadaha la sugay oo kaliya waxaana heli kara oo keliya dad tiro yar oo haysta xuquuqda gaar ah ee nidaamyada noocaan ah, waxaana laga rabaa inay macluumaadka ku hayaan qarsoodi. Intaa waxaa dheer, dhammaan xogta xasaasiga / creditka aad bixiso waxaa lagu qortaa iyada oo loo marayo tiknoolajiyada Secure Socket Layer (SSL).
Waxaan hirgelinnaa tallaabooyin kala duwan oo amniga ah marka qofku isticmaalo amar bixinta, soo gudbiyo, ama helitaanka macluumaadka si loo ilaaliyo ammaanka macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed.
Haa. Kukiyada waa faylal yaryar oo degel ama bixiyaha adeeggu ku wareejiyo kombiyuutarkaaga kumbuyuutarka adag ee loo maro biraawsarkaaga internetka (haddii aad oggol tahay) taas oo awood u siineysa nidaamyada shabakadda ama bixiyaha adeegga inuu aqoonsado biraawsarkaaga isla markaana uu qabto oo xusuusnaado macluumaadka qaarkood. Tusaale ahaan, waxaan u isticmaalnaa buskud si ay nooga caawiso inaan xasuusano oo aan socodsiino waxyaabaha ku jira galkaaga wax soo iibsiga. Waxaa sidoo kale loo isticmaalay inay naga caawiyaan fahamka waxyaabaha aad doorbidaysid ee ku saleysan waxqabadka hore ama hadda socda, kuwaas oo noo oggolaanaya inaan ku siino adeegyo hagaagsan. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa cookies-ka si ay nooga caawiso isku dubaridka xogta ku saabsan taraafikada goobta iyo isdhaxgalka barta si aan u bixinno khibradaha iyo qalabka mustaqbalka mustaqbalka.
Waxaan u isticmaali karnaa cookies si:
• Ku caawi in aad xasuusato oo aad socodsiiso walxaha ku jira galka wax soo iibsashada.
• Fahmaan oo keydso dookha isticmaale ee booqashooyinka mustaqbalka.
• Hayso dabagal xayeysiis.
• Isku-dubbaridka xogta guud ee ku saabsan gaadiidka goobta iyo isdhexgalka goobta si aad u bixiso waayo-aragnimo goobta iyo mustaqbalka. Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa adeegyo qarsoodi ah oo la isku halleyn karo kuwaasi oo macluumaadkaan ku raadinaya anaga.
Waad dooran kartaa in kombuyuutarkaagu kuu digaan markasta oo cookie loo diro, ama waxaad dooran kartaa inaad damiso dhammaan cookies-ka. Tan waxaad ku sameyneysaa jadwalka biraawsarkaaga. Maaddaama biraawsarku waxyar ka duwan yahay, fiiri Mawduuca Gaarka ah ee biraawsarkaaga si aad u baratid habka saxda ah ee wax looga beddelo kukiyadaada.
Haddii isticmaalayaashu ay u diidaan cookies in ay browser ah:
Haddii aad damiso cookies-ka waxay dami doontaa qaar ka mid ah astaamaha bogga.
Kama iibinno, kama ganacsanno, ama haddii kale kuma wareejinno dhinacyada ka baxsan macluumaadkaaga Shakhsi ahaan lagu Aqoonsado illaa aan u siino dadka isticmaala ogaysiiska hore. Tan kuma jiraan la-hawlgalayaasha marti-gelinta websaydhada iyo dhinacyada kale ee naga caawiya ka shaqeynta degelkeena, sameynta ganacsigeenna, ama u adeegidda isticmaaleyaashayada, illaa inta dhinacyadaas ay oggolaadaan inay macluumaadkaan xafidaan. Waxa kale oo laga yaabaa inaan sii deyn karno macluumaadka markii la siidaayay ay ku habboon tahay in sharciga loo hoggaansamo, lagu hirgaliyo siyaasadaha goobta, ama aan ilaalinno xuquuqdeena ama kuwa kale, hantida ama nabadgelyada.
Si kastaba ha noqotee, macluumaadka qof ahaan loo aqoonsan karo ee qofka loo aqoonsan karo ayaa loo siin karaa dhinacyada kale ee suuq-geynta, xayeesiinta, ama isticmaalka kale.
Marmarka qaarkood, ansixinteena, waxaan ku dari karnaa ama waxaan ku soo bandhigi karnaa badeecooyin ama adeegyo dhinac sadexaad ee boggeena internetka. Goobaha sadexaad ee sadexaad waxay leeyihiin siyaasado gaar ah oo gaar ah. Sidaa darteed ma lihin wax masuuliyad ah ama masuuliyad ah mawduucyada iyo waxqabadyada boggaan la xiriira. Si kastaba ha ahaatee, waxaanu dooneynaa inaan ilaalino sharafta boggayaga iyo inaan soo dhaweyno wax jawaab ah oo ku saabsan goobahan.
Shuruudaha xayeysiinta ee Google waxaa lagu soo koobi karaa mabaadiida Xayeysiinta Google. Waxaa loo diyaariyey inay u fidiyaan khibrad wanaagsan dadka isticmaala. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Waxaan adeegsanaa Google Adsense Advertising shabakadeena.
Google, oo ah iibiyaha dhinac saddexaad ah, wuxuu adeegsadaa cookies si uu ugu adeego xayeysiiska bartayada. Adeegsiga Google ee cookie-ka 'DART' wuxuu awood u siinayaa inuu u adeego xayeysiisyada isticmaalayaasheena iyadoo lagu saleynayo booqashooyinkii hore ee bartayada iyo bogagga kale ee internetka. Isticmaalayaasha ayaa ka bixi kara isticmaalka cookie-ka 'DART' iyagoo booqanaya barnaamijka Google Ad iyo Nidaamka Xog-hayaha ee Shabakadda Macluumaadka.
• Dib u eegista Google AdSense
• Warbixinta Google Muuqaal Sawireed
• Warqadaha iyo Warbixinta xiisaha
• Iskudhafka Platform DoubleClick
Annaga, wehelka iibiyaasha sadexaad sida Google waxay isticmaalaan cookies-kii hore (sida "cookies Google Analytics)" iyo "cookies-third party cookies" (sida baqshadda DoubleClick) ama aqoonsiyada kale ee saddexaad si wadajir ah loo ururiyo macluumaadka la xidhiidha isticmaalka dadka rikoodhada adreesyada iyo adeegyada kale ee ad adeegga sida ay ula xiriiraan boggayaga internetka.
Isticmaalayaasha ayaa dooran kara sida Google ee kuu xayeysiinayo adiga oo isticmaalaya bogga Google Settings Settings. Haddii kale, waxaad ku dari kartaa adigoo soo booqanaya bogga shabakadda ee "Advertising Initiative Initative Opt Out" ama adiga oo adeegsanaya Google Analytics Opt Out Browser ku dar.
Sharciga Ilaalinta Gaarka ah ee California
CalOPPA waa sharciga ugu horreeya ee qaranka ee u baahan degellada websaydhada ganacsiga iyo adeegyada khadka tooska ah loogu diro siyaasad sir ah. Gaaritaanka sharcigu wuxuu u fidsan yahay meel ka baxsan California si looga baahan yahay qof ama shirkad kasta oo Mareykanka ah (iyo adduunka oo dhan) oo ka shaqeeya websaydhyada ka soo ururinaya Macluumaadka Shakhsi ahaaneed ee Macaamiisha Kaliforniya si ay ugu dhajiyaan siyaasad qarsoodi ah oo qarsoodi ah boggeeda internetka iyagoo sheegaya sida saxda ah macluumaadka la ururinayo iyo kuwa shaqsiyaadka ama shirkadaha lala wadaagayo. - Ka eeg wax badan: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Sida laga soo xigtay CalOPPA, waxaan ku raacsanahay waxyaabahan soo socda:
Isticmaalayaasha waxay soo booqan karaan boggeena si qarsoodi ah.
Marka siyaasad-shaqsiyeedkaas la abuuro, waxaan ku dari doonaa isku-xirka boggeena guriga ama ugu yaraan, bogga ugu muhiimsan ka dib markaad galeyso boggayaga.
Xiriirkeena Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa ku jira ereyga 'Asturnaanta' waxaana si fudud looga heli karaa bogga kor lagu soo sheegay.
Waxaa laguu sheegi doonaa isbeddel Nidaam Khaas ah:
• On our Policy Policy ah
Waxay bedeli kartaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed:
• Adoo naga soo diraya email
• Adoo galaya xisaabtaada
Sidee boggayaga wax uga qabtaan Calaamadaha aan raadin?
Waxaan u ixtiraameynaa calaamadaha aan raacin iyo kuwa aan la socon, cookie-ka-soosaarka, ama adeegso xayaysiis marka la sameynayo farsamaynta browser-ka (DNT).
Miyuu dugsigeenu u oggolaanayaa raadinta akhlaaqda dhinac saddexaad?
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in aan oggol nahay qayb saddexaad ee dabagalka dhaqanka
COPPA (Sharciga Ilaalinta Asturnaanta Ilaalinta Carruurta)
Markay noqoto ururinta macluumaadka shaqsi ahaaneed ee ka hooseeya carruurta da 'doodu ka yar tahay 13 sano, Xeerka Ilaalinta Asturnaanta ee Internetka ee Carruurta (COPPA) ayaa waalidiinta gacanta ku haya. Gudiga Ganacsiga ee Federaalka, wakaaladda ilaalinta macaamiisha Mareykanka, waxay dhaqan gelisaa Xeerarka COPPA, oo ka warbixinaya waxa ay tahay in hawl wadeenada websaydhada iyo adeegyada khadka tooska ah ay sameyaan si ay u ilaaliyaan qarsoodiga iyo badbaadada carruurta qadka.
Si khaas ah uma iibino carruurta da'doodu ka hooseyso da'da 13.
Dhaqannada Macluumaadka Wanaagsan
Mabaadiida Macluumaadka Cadaaladda Aasaasiga ah waxay lafaguraan laf-dhabarka sharciga gaarka ah ee Maraykanka iyo fikradaha ay ku jiraan waxay door weyn ka ciyaaraan horumarinta shuruucda ilaalinta xogta adduunka. Fahmida Macluumaadka Cadaaladda ah ee Xeeladaha Tababarka iyo sida ay tahay in loo hirgeliyo waa mid muhiim ah si ay u hoggaansamaan shuruucda gaarka ah ee gaarka ah ee ilaaliya macluumaadka shakhsiyeed.
Si loola macaamilo Xogta Cadaalada ah (Fair Information Practices) waxaanu qaadi doonaa tallaabada soo socota ee soo socota, haddii jebinta macluumaadka ay dhacaan:
Waxaan kuugu soo wargalineynaa email ahaan
• Maalinta ganacsiga 1
Waxaanu ku wargalineynaa dadka isticmaalaya iyada oo la adeegsanayo ogaysiiska goobta
Waxaan sidoo kale oggolahay Mabaadi'da Shakhsi ahaaneed ee Maareynta Shakhsiga kaas oo u baahan shakhsiyaadka xaq u leh inay si sharci ah u fuliyaan xuquuqda la hiriiro ee ka soo horjeeda xog ururiyaha iyo qandaraaslayaasha ku fashilmay in ay u hoggaansamaan sharciga. Mabda'aas waxay u baahan tahay oo keliya in shakhsiyaadka ay leeyihiin xuquuqaha ka dhanka ah dadka isticmaala macluumaadka, laakiin sidoo kale in shakhsiyaadka ay dib u soo celiyaan maxkamad ama hay'adaha dawladda si ay u baaraan iyo / ama maxkamadaynaan aan ku hoggaansaneyn habka xogta.
Sharciga "CAN-SPAM" waa sharci dejinaya xeerarka emailka ganacsiga, dejinta shuruudaha farriimaha ganacsiga, waxay dadka siinayaa xaq u leeyihiin in ay emails ka joojiyaan in loo diro iyaga, oo waxay soo saaraan ganaax adag oo loogu talagalay xadgudubyada.
Waxaan soo aruurineynaa cinwaanka emailkaaga si aad:
• U dir macluumaadka, ka jawaab su'aalaha, iyo / ama codsiyo kale ama su'aalo
• Amarada qaraarka iyo in loo diro macluumaadka iyo cusboonaysiinta amarrada.
• Ku soo diri macluumaad dheeraad ah oo la xiriira alaabtaada iyo / ama adeegga
• Suuqa si liistada liiska boostada ama sii wad si aad noogu soo dirto macaamiishayada ka dib markii macaamilka asalka ahi dhacay.
Si ay ula socoto CANSPAM, waxaan ku raacsanahay kuwan soo socda:
• Ha isticmaalin maaddo been ah ama marin habaabin ama cinwaanada emailka.
• Aqoonsiga farriinta sida xayeysiis ah si macquul ah.
• Ku dar cinwaanka jimicsiga ee ganacsigeena ama xarumaha goobta.
• La socoshada adeegga suuq-geynta sadexaad ee dhinaca email-ka ah ee u hoggaansanaanta, haddii mid loo isticmaalo
• Sharaxaad ka bixi codsiyada ka-joojinta / ka-joojinta.
• U ogolow dadka isticmaala in ay joojiyaan isticmaalka xiriirka hoose ee email kasta.
Haddii wakhti kasta aad jeclaan lahayd inaad ka noqoto in aad hesho emails mustaqbalka, waxaad noogu soo diri kartaa
oo waxaan si degdeg ah kaa saari doonaa ALL waraaqaha.
Us la xiriiraya
Haddii ay jiraan wax su'aalo ah oo ku saabsan siyaasaddan asturnaanta, waxaad nala soo xiriiri kartaa adigoo isticmaalaya macluumaadka hoose.
Toronto, Ontaariyo M5B2M6